Zidane oo soo bandhigay Cayaartoyda u diyaarka ah kulanka adag ee Atletico Madrid | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Zidane oo soo bandhigay Cayaartoyda u diyaarka ah kulanka adag ee Atletico Madrid
Dhaawacyo badan oo aan caadi ahayn ayaa haleelay ciyaartoygiisa, laakiin in uu guul gaadho iyo shax uu kala hor tago in uu diyaarsado waa khasab. Isku beddel ciyaartooyo ayaa lagama maarmaan ah, maadaama ay in badan oo muhiim ka ah ay ka maqan yihiin.
Ciyaaryahannada khadka dhexe kuwa ciyaari doona way iska cad yihiin, sababtoo ah Luka Modric, Mateo Kovacic iyo Isco way caafimaad qabaan, waxaana la sugayaa in Benzema caafimaadkiisa war rasmi ah laga soo raaso.
Zidane oo warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahannado ka duwan kuwiisii hore ee uu ku ciyaari jiray, laakiin qaabka ciyaartiisu isku mid ayuu ahaan doonaa.
“Nidaamka iyo ciyaaryahannadu way kala duwanaan karaan, laakiin qaabku sidiisii ayuu ahaan doonaa.” Sidaas ayuu yidhi Zidane oo shir jaraa’id ku qabtay Madrid gellinkii hore ee Jimcaha, waxaana uu intaa ku daray: “Xaalad wanaagsan ayaanu ugu nimid Caldeton, iyadoo ay nagu soo noqdeen dhawr ciyaartoy oo muhiim ah.
“Mar kasta dhibaatto ayaa iman karaysa, laakiin waxa aanu diiradda saaraynaa in aanu gacanta ku dhigno ciyaarta muhiimka ah, diyaarna waanu u nahay.”
Zidane waxa uu caddeeyey in Benzema uu diyaar u yahay ciyaartan oo garoonka lagu bilaabi karayo, laakiin go’aanka kama dambaysta ah uu gaadhi doono ciyaarta ka hor.
Morata ayaa ku dhaawacmay ciyaar xulka dalka Spain uu la yeeshay England, dhaawaciisana waxa lagu eedeeyey tababaraha Spain oo la sheegay in uu ciyaarsiiyey isagoo dhaawac ah, laakiin Zidane oo la weydiiyey cidda eedda leh ayaa diiday in uu cidna eedda saaro.